बिवाहको ५ दिन सम्म दुलहिलाई निर्बश्त्र राख्ने अचम्मको चलन – Idea Khabar
बिवाहको ५ दिन सम्म दुलहिलाई निर्बश्त्र राख्ने अचम्मको चलन
आइडिया खबर२०७६ फाल्गुन २४, शनिबार २२:५०
हिमाचल प्रदेशको मणिकर्ण घाटीमा एक पिनी गाउँ छ त्याहांको प्राचिन मान्यता अनुसार विवाह पछि दुलहिलाई ५ दिन सम्म पूरा नग्न राखिन्छन्। यो सुनेर तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्ला ? तर यो सत्य हो। यति मात्र होइन, यस दुराचारी प्रथाको आडमा दुलहीले पनि विवाहपछि यहाँ अनौंठो नियमहरू पछ्याउनुपर्दछ, यस प्रचलनको कारणले, यहाँ आउने हरेक दुलहीले ५ दिनसम्म ऊनको बनाएको पट्टिका लगाउनु पर्छ। ।
यी ५ दिनसम्म, पति र पत्नी न त एक अर्कासँग कुरा गर्न सक्दछन् न एक अर्कालाई छुन्छन्। हालसम्म पनि दुबैलाई इशाराहरूमा कुरा गर्न मनाही छ। यस गाउँका प्रत्येक व्यक्तिले नयाँ दुलहीलाई नग्नता अन्त्य नगरेसम्म सबैलाई रक्सी पिउनु अनिवार्य छ। यो गाउँमा वर्षौंदेखि यो परम्पराको अभ्यास भइरहेको छ, त्यो गाउँको नयाँ पुस्ताले पनि यस प्रचलनलाई अवलम्बन गरेको मानिन्छ। यस विश्वासका अनुसार सावन महिनाको ५ दिनसम्म श्रीमान् र श्रीमती एक अर्कादेखि टाढा बस्नुपर्दछ, यदि कसैले त्यसो गर्दैन भने तिनीहरूको विनाश निश्चित मानिन्छ।
● परम्परा पछाडिको कथा
यहाँका मानिसहरू विश्वास यो छ कि जब लाहुआ घोड देवता पिणीको गाउँमा पुगे तब त्यहाँका प्रेतहरूले उनीहरूको आतंक खडा गरे। त्यसकारण भाद्र सक्रान्तिलाई यहाँ कालो महिनाको रूपमा लिइन्छ। यो त्यही दिन थियो जब देवीदेवताहरूले पिन्नीमा प्रवेश गरे अनि तिनीहरूले जनकल्याणको लागि प्रेतहरूलाई मारे र यो प्रथा त्यही दिनदेखि शुरु भयो । जुन पुस्ता-पुस्ता सम्म चलिरहेको छ।
भाग्यशाली महिलाहरुका यी अंग ठूला हुन्छन् जान्नुहोस
२०७६ मंसिर २, सोमबार १५:३१
जाडोमा के खाने, के नखाने ? यस्ता छन् ९ टिप्स, जानी राखौं
२०७६ मंसिर ८, आईतवार ०८:२२